FEON'NY FILAZANTSARA
"Manambara an'i Kristy amin'ny Firenena.... ary mitarika ny Firenena ho ao amin'ny Fiangonana."
Pour utiliser la langue Française
Fandaharana amin'ny radio
Ministera ho an'ny Tanora
Fitoriana eny amin'ny Fonja
Raha te-hahalala bebe kokoa mombany ny FAMPIANARANA SORATRA MASINA ianao dia manasa anao hamaky ny fanazavana manaraka eto ambany
Action Modifier et Supprimer
- Ny mpianatra dia 15 taona farafahakeliny
- Tokony hanana Baiboly (amin'ny fiteny Frantsay ho an'izay nisafidy izany),
- Mianatra samirery any an-tokantranony avy ny mpianatra
- Ny Lesona tsirairay dia arahina fitsapam-pahaizana (antsoina koa hoe 'Adina') tandrify izany; halefa miandalana any amin'ny mpianatra ny Lesona
- Ho setrin'izany, ny rnpianatra tsirairay kosa, rehefa vitany ny fianarana ny Lesona iray, dia mamerina aty amin'ny FF ny valin'ny Adina izay nataony.
- Fomba telo no azo isafidianana hifandraisana amin'ny FF:
amin'ny alalan'ny Paositra
amin'ny alalan'ny mpiara-miasa any an-toerana
* amin'ny fanatonana mivantana aty amin'ny foiben'ny FF
* amin'ny alalan'ny email sy Internet
2. MOMBAMOMBA NY FIANARANA
- Nozaraina ho Taona Voalohany sy Taona Faharoa izao fampianarana izao.
- Ny Taona tsirairay kosa dia notsinjaraina hisy Lesona folo (10) avy
- Ny nahavita ny Taona Voalohany dia amporisihana hanaraka ny Taona Faharoa
- Malalaka ny fe-potoana hamitan'ny mpianatra ny fianarany, anefa tsy tokony hihoatra ny herinandro efatra (4) ny hamerenana ny adina iray aty amin'ny FF; taona iray (1) eo ho eo araka izany ny faharetan'ny Taona Voalohany na ny Taona Faharoa.
- Ho hitanao etsy ambany ny Fandaharam- pianarana
3. NY LESONA
- Ny Lesona no tapany voalohany amin'ny fampianarana
- Nozaraina ho paragrafy maromaro ny Lesona iray, mba hahazoana mamoaka ireo hevi- baventy tiana hasongadina sy hotsindriana
- Hamafisina amin'ny an-dalan-tSoratra Masina izany amin'ny ankapobeny, satria ny Soratra Masina no fototra iorenan'ny fampianarana rehetra; amporisihana ny mpianatra hamaky tsara azy ireny manontolo, ka handinika tsara izay heviny sy izay ifandraisany amin'ny fampianarana atolotra isaky ny paragrafy.
- Toy ny fianarana rehetra dia amporisihina ny mpianatra hiezaka araka izay azony atao hahazo tsara ny Lesona, mba hahafahany miatrika ny fitsapam-pahaizana tandrify izany (ny Adina isaky ny Lesona izany)
- Raha misy paragrafy tena tsy azon'ny mpianatra tsara amin'ny Lesona, dia azony atao ny manatona na manoratra aty amin'ny FF hahazoany mandray ireo fepetra sy fandaminana napetraky ny FF mikasika izany.
- Ny Lesona rehetra voarain'ny mpianatra sy ny Adina vita fitsarana, izay marihina fa averina amin'ny mpianatra, dia mijanona ho fananany.
4. NY ADINA
- Ny adina no tapany faharoa izay tena manana ny lanjany tokoa amin'ny fampianarana.
- Ny valim-panontaniana tsirairay dia tokony, voalohany indrindra, hiainga amin'izay voalaza ao amin'ny Lesona amin'ny paragrafy sy ny andalan-tSoratra Masina tandrify izany.
- Tokony ho hita taratra amin'ny valim-panontaniana fa azon'ny mpianatra tsara izay anontaniana azy. Mety hisy famelabelarana hasaina ataony.
- Aza hadinoina ny mametraka ny anarana, ny laharana, ary ny adiresy ao amin'ny Adina.
6. FISORATANA ANARANA
- Ny mpianatra rehetra maniry hanaraka izao Fampianarana izao dia tsy maintsy misoratra anarana aloha.
- Misy Taratasy Fisoratana anarana tandrify izany. Azon'ny mpianatra atao ny:
* Manatona mivantana aty amin'ny Biraon'ny FF;
* Manatona ireo mpiara-miasa isan-toerana (Fiangonana na Sekoly na ivon-toerana hafa mifandray amin'ny Feon 'ny Filazantsara)
* Manoratra (na miantso) aty amin'ny foiben'ny FF;
* Misoratra anarana eto amin'ny site web. Tsindrio eto
Ny mpianatra tsirairay dia afaka misafidy amin'ireo fitenim-pirenena roa ampiasain'ny FF, hanarahany ny fampianarana : Malagasy na Frantsay, na izy roa miaraka.
Rehefa nahatody soa aman-tsara ny Taona Voalohany ny mpianatra, dia tolorana Sertifika (na Taratasy Fanamarinana izany). Dia toy izany koa ny Taona Faharoa.
9. TENY FARANY
Amporisihina ny mpianatra hanokana fotoana sahaza, amin'ny fianarana ny Lesona sy ny famaliana ny Adina.
Tsara indrindra nymitokana mivavaka mialoha izany, mangataka amin'ny Tompo hanome fahazavan-tsaina, fanoloran-tsaina, fahalalana ary fo mino sy manaiky ary mazoto hianatra, eo ambany fitarihan'ny Fanahin'Andriamanitra.
Tokony tsy atao lavitry ny tanana mandrakariva ny Baiboly.
FANDAHARAM-PIANARANA, TAONA VOALOHANY:
"FIANARANA NY FOTOTRY NY FINOANA KRISTIANA"
Ny tanjona kendrena amin'ity Fampianarana Soratra Masina - Taona voalohany ity dia ny hahazoan'ny mpianatra fahalalana ankapobeny momba ny fototry ny finoana kristiana.
Lesona 1: Ny fivavahana kristiana sy ny Soratra Masina.
Lesona 2: Ny Trinite Masina.
Lesona 3: Ny anjely sy ny devoly.
Lesona 4: Ny famoronana sy ny fahotana ary ny fahasoavan'ny famonjena.
Lesona 5: Ny finoana sy ny fahamarinana ary ny fahamasinana.>br/>
Lesona 6: Ny fiainana kristiana.
Lesona 7: Ny fitandreman-draharaha kristiana.
Lesona 8: Ny mpino mahatoky.
Lesona 9: Ny fiasam-pahasoavana.
Lesona 10: Ny Lalàna sy ny Filazantsara.
FANDAHARAM-PIANARANA, TAONA FAHAROA:
"FANDALINANA NY FINOANA KRISTIANA"
Tsy hafa ity Fampianarana Soratra Masina - Taona faharoa ity fa fanamafisana sy fandalinana izay efa nianarana tao amin'ny taona voalohany. Noho izany, mitovy ihany ny filaharana ara-potokevitry ny lesona. Ny lohateny sy ny votoatiny kosa dia hafa.
Lesona 1: Ny hasarobidin'ny fivavahana kristiana sy ny Baiboly.
Lesona 2: Mitombo fahalalana tsara an'Andriamanitra.
Lesona 3: Fantaro ny zavatra rehetra, hazony izay tsara.
Lesona 4: Ny fifandraisan'ny famoronana sy ny fahotana ary ny famonjena.
Lesona 5: Velon'ny finoana sy hamarinina maimaimpoana ary mitombo amin'ny fahamasinana.
Lesona 6: Fandalinana ny amin'ny asa tsara sy ny fahasoavana.
Lesona 7: Fandalinana ny amin'ny fiainana kristiana.
Lesona 8: Kristiana mahomby amin'ny fitandreman-draharaha.
Lesona 9: Ny lanjan'ny fahatokiana eo amin'ny fiainan'ny mino.
Lesona 10: Fandalinana ny amin'ny Lalàna sy ny Filazantsara ary ny Fiasam-pahasoavana.
Raha te hisoratra anarana, tsindrio eto.
NY FIVAVAHANA KRISTIANA SY NY SORATRA MASINA
NY TRINITE MASINA
NY ANJELY SY NY DEVOLY
NY FAMORONANA SY NY FAHOTANA ARY NY FAHASOAVAN'NY FAMONJENA
NY FINOANA SY NY FANAMARINANA ARY NY FANAMASINANA
NY FIAINANA KRISTIANA
NY FITANDREMAN-DRAHARAHA KRISTIANA
NY MPINO MAHATOKY
NY LALANA SY NY FILAZANTSARA
NY HASAROBIDIN'NY FIVAVAHANA KRISTIANA SY NY BAIBOLY
MITOMBO FAHALALANA TSARA AN'ANDRIAMANITRA
FANTARO NY ZAVATRA REHETRA, HAZONY IZAY TSARA
NY FIFANDRAISAN NY FAMORONANA SY NY FAHOTANA ARY NY FAMONJENA
FANDALINANA NY AMIN
Fandalinana ny amin'ny fiainana Kristianina
Kristiana mahomby amin'ny fitandreman-draharaha
Ny lanjan'ny fahatokiana eo amin'ny fiainan'ny mino
Fandalinana ny amin'ny lalàna sy ny filazantsara ary ny fiasamp-pahasoavana
Ireo Lesona sy Adina miandry anao
Miarahaba , manasa anao hisoratra anarana amin'ny FIANARANA. Tsindrio ETO
Ianao no mpitsidika faha 49609
Vaovao mikasika ny fianaranao
150 ny mpianatra eto amin'ny tranokala feon'ny filazantsara ankehitriny.
Miisa 532 ny mpikambana ankehitriny.
Copyright © 2019 FEON'NY FILAZANTSARA | siteWeb nototosain'ny Maranatha Compagny